सुनको मूल्यमा दिनदिनै कीर्तिमानी, यस्ता छन् ५ कारण | NewsKarobar
गृहपृष्ठ सुनको मूल्यमा दिनदिनै कीर्तिमानी, यस्ता छन् ५ कारण
लगातार किन उकालो लाग्दै छ सुन ?
नेपाली बजारमा साउनयताका २२ दिनमा सुनको मूल्य प्रतितोला ५ हजार रुपैयाँले उकालो लागेको छ । साउन १ गते ६४ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रतितोलाका दरले कारोबार भएको छापावाल सुन साउन २२ गते ६९ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको हो ।
बितेका पाँच दिनमै सुनको मूल्य प्रतितोला ४५ सय रुपैयाँले उकालो लागेको छ । छापावाल सुन साउन १६ गते ६५ हजार रुपैयाँ प्रतितोलाका दरले कारोबार भएको थियो । त्यसयताका हरेक दिन सुनको मूल्यले कीर्तिमान कायम गरिरहेको छ ।
२०७५ सालभर ६० हजार आसपासमा प्रतितोला सुन किनबेच भयो । २०७६ सालको वैशाखमा सुनको मूल्य ५९ हजार र ६० हजारको बीचमा कारोबार भइरह्यो । जेठमा २६ गते सुनको मूल्य सर्वाधिक ६२ हजार ६ सय रुपैयाँ पुग्यो । असारमा १० गते ६५ हजार ५ सयको कीर्तिमानी मूल्य बनाएपछि सुनको मूल्य केही घटेर ६४ हजार ३ सयसम्म झ-यो । साउन लागेपछि भने सुनको मूल्यले दिनदिनै जसो नयाँ-नयाँ कीर्तिमानी बनाइरहेको छ ।
नेपाली बजारमा आन्तरिक कारणले मात्र सुनको भाउ बढ्दैन । तर, चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले सुनमा भन्सार बढाएपछि मूल्य केही प्रभावित बन्यो । गत वर्ष प्रति १० ग्राम सुनमा ४२ सय रुपैयाँ तिर्दा पुग्नेमा बजेटपछि ५ हजार तिनुपर्ने भएको छ । किलोमा ८० हजार रुपैयाँ कर बढेको छ ।
सुनको मूल्य बढ्नुको मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति नै हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष मणिरत्न शाक्य चीन-अमेरिका व्यापार युद्ध झन् पेचिलो हुँदै जाँदा सुनको मूल्यमा अप्रयासित वृद्धि हुँदै गएको बताउँछन् । ‘विश्वका सबैभन्दा ठूला अर्थतन्त्र भएका दुई शक्तिराष्ट्र चीन र अमेरिकाबीचको ट्रेड वार पेचिलो बन्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुले आफ्नो साविक व्यापारबाट पैसा झिक्दै सुनतर्फ लगानी गरेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘परिणामतः सुनको माग अकल्पनीय ढंगले बढ्यो ।’ अमेरिकाले चीनबाट आयात हुने सामानमा साउन १७ गतेदेखि नै ३०० बिलियन डलरबराबरको सामानमा १० प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाएको छ ।
चीन र अमेरिकाबीचको व्यापार युद्धको प्रभाव डलर र सुन सञ्चितिसँग जोडिएको छ । चीनले विगत वर्षहरुमा डलर सञ्चितिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको थियो । चीन र अमेरिकाबीचको व्यापार युद्ध उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा केही महिनायता चीनले डलरभन्दा सुन सञ्चितिमा जोड दिएको छ । चीनले उच्च मात्रामा सुन सञ्चिति बढाएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रभावित भएको हो ।
विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरूले फेब्रुअरीसम्ममा सुनको सञ्चिति ३० हजार टनले बढाएका छन् । त्यसको ठूलो हिस्सा चीनले होल्डिङ गर्छ ।
सुनको मूल्य बढ्नुको अर्को कारण अमेरिकी फेडरल रिजर्भ बैंकले मातहतका सबै बैंकमा लागू हुनेगरी निक्षेपमा ब्याजदर ०.२५ प्रतिशतले घटाएको छ । ब्याजदर उच्च घटेपछि ठूला-साना निक्षेपकर्ताले बैंकबाट पैसा झिकेर सुन किन्न थालेका कारण बजार असन्तुलित भई मूल्य बढेको हो । फेडरल रिजर्भ बैंकले गर्ने निर्णयले विश्वभरको मौद्रिक प्रणालीमा हलचल ल्याउँछ ।
भारत र पाकिस्तानबीचको ७० वर्षदेखिको कास्मिर युद्ध पनि सुनको मूल्य बढ्नुको कारक बनेको छ । कास्मिर युद्ध उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँ (आईसी) कमजोर बनेको छ । डलरको मूल्य बढेका कारण सुनको मूल्यवृद्धिमा सहयोग पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष शाक्य बताउँछन् । आईसी कमजोर बन्दा वस्तु आयातका लागि बढी रकम तिर्नुपर्ने हुँदा भारतीय व्यापारी व्यवसायीले पनि सुन खरिद बढाएका छन् ।
अमेरिकाले चीनसँग मात्र व्यापार युद्ध गरिरहेको छैन । इरान र उत्तर कोरियासँग अमेरिकाको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धले पनि उद्योगी व्यवसायीमा ठूलो असर पारेको छ । जर्मनीको खस्कँदो अर्थतन्त्रको प्रभाव पनि सुन बजारमा परेको छ । फलतः बढी जोखिम हुने सेयर र उद्योगधन्दाका लगानीकर्ता पनि सुरक्षित क्षेत्र खोज्दै सुन खरिद गरिरहेका छन् । जोखिम शून्य हुने भएकाले सुनलाई लगानीकर्ताले ‘सेफ जोन’को रुपमा लिने गर्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भन्दा नेपालमा सुन महँगो छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बुधबार सुनको मूल्य प्रतिकिलो ५४ लाख ४० हजार २३४ रुपैयाँ छ । नेपालमा भने प्रतिकिलो ५५ लाख ३० हजार रुपैयाँ छ ।
नेपालमा वाणिज्य बैंकहरुले दैनिक २० किलो सुन युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई)बाट आयात गर्छन् । सामान्य अवस्थामा नेपालको बजार माग दैनिक ३५ किलोसम्म हुन्छ । विगतमा सामान्य अवस्थामा दैनिक ४५ किलोसम्म किनबेच हुने गरेकोमा अहिले ३५ किलोमा झरेको महासंघका पूर्वअध्यक्ष शाक्य बताउँछन् । ‘केही पुरानो सुनले पनि बजार माग सन्तुलित भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर मूल्य लगातार उकालो लागेपछि केही दिनयता सुनको किनबेच ठप्प छ ।’
कहिलेसम्म बढ्छ ?
सुनको भाउ अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमै निर्भर रहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति बिग्रँदो अवस्थामा रहेकाले सुनको भाउ तत्काल घट्ने संकेत नदेखिएको पूर्वअध्यक्ष शाक्यको विश्लेषण छ । ‘ट्रेड वारहरु तत्काल साम्य होलान् भन्ने लाग्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘यो अवस्था रहेसम्म सुनको मूल्य उकालो लाग्ने देखिन्छ, कति बढ्छ चाहिँ भन्न सकिन्न ।’
लन्डनको वस्तुबजारमा सेप्टेम्बरको पहिलो सातासम्मका लागि उच्च मूल्यमा सुन बुकिङ भएको भारतीय सञ्चारमाध्यम ‘द मिन्ट’ले जनाएको छ । यो तथ्यले कम्तीमा पनि सेप्टेम्बर पहिलो सातासम्म मूल्य बढिरहने स्पष्ट पार्छ ।
पछिल्लाे - गत आर्थिक वर्षमा १२१ तुइन विस्थापन गरिए
अघिल्लाे - नेपाली मौलिकता झल्कने गरी संरचना निर्माण गर्न प्रस्तुत प्रस्तावमा छलफल